Caalamka oo cadaadis saaraya Qaddaafi - BBC Somali
Caalamka oo cadaadis saaraya Qaddaafi
28 Febraayo 2011
Image caption Gaddafi uu khudbad ka jeedinayay faagaro ku yaalla Tripoli
Wakiillo ka socda caalamka ayaa ku shiraya magaalada xarunta golaha xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay oo ka wada hadli doona dhibaatada Libya ka taagan.
Wadahadaladan ay leeyihiin wasiiradda arrimaha dibedda ee caalamka ayaa waxa ay ka muhiimsan yihiin waxa ka dhex dhaca golaha xuquuqda aadanaha dhexdiisa.
Hillary Clinton, ee xoghaya arrimaha dibedda Mareykanka ayaa ku dhawaaqi doonta shirkan magaalada Geneva ee wasiiradda arrimaha dibedda Yurub, oo uu ku jiro xoghayaha arrimaha diebdda ee ritain William Hague in tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhan ah hogaamiyaha Libya la qaado, kadib go'aankii Qaramada Midoobay ay cunqabateynta ugu soo rogtay.
Mareykanka iyo UK ayaa ku baaqaya in Muammar Gaddafi uu sida ugu dhaqsaha badan xilka isaga dego.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxaa uu cod loo dhan yahay hore cuna qabateyn ugu soo rogay hoggaamiyaha Libya iyadoo la isku raacay in aan wax hub ah laga iibin karin taageerayaasha Qaddaafi, safarrada oo laga mamnuucay kornayl Qaddaafi, qoyskiisa iyo wasiirradiisa iyo dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska oo xayiraad saaray hantida Qaddaafi.
Mid ka mid ah talaabooyinka ee suurtagalka ah ayaa waxay noqoneysaa in la sameeyo meel ka caaggan duullimaayada hawada Lobya, si dhinaca hawada looga go'doomiyo kornayl Qaddaafi.
in kastoo taasi ay u baahan tahay qaraar kale oo uu gaaro golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Mareykanku waxa uu sheegay inuu doonayo qorshe mideysan oo wax looga qabto rabshadaha ka taagan Libya.
Mrs Clinton waxaa sidoo kale ay wada hadal la yeelan doontaa diblomaasiyiin ka tirsan gobolka, oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibedda ee Tunisia iyo Jordan.
Dhinaca kale waxaa sidoo kale wakiilada Reer yurub ee shirka ay ka wada hadli doonaan oo uu ugu horeeyo Talyaaniga tirada laga cabsida qabo inay sii kororto ee dadka soo galootiga ah ee soo galaya qaaradda Yurub ee ka imanaya xeebaha waqooyiga Afrika.
Hey'adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR oo xarunteeda weyn ay tahay magaalada Geneva ayaa laga yaabaa inay ku celiso baaqeedii ahaa in Yurub ay deeqsinimo u muujiso cid walba oo ka soo baxsaneysa rabshadaha ka dhacaya gobolkaasi.